वेश्या– पुरूष- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
‘परिवर्तन भइनँ भने झन् ओरालो लाग्नेछु’
भाद्र ३१, २०७४ गोकर्ण गौतम
‘लुट’ फिल्मबाट निश्चल बस्नेतले नेपाली फिल्मलाई एउटा दिशा दिए, खासगरी मौलिकता आत्मसात् गर्ने मामलामा । तर यो ५ वर्षको बीचमा निश्चल आफैं दीशाहीन हुँदै गएको संकेत देखापरिरहेको छ ।
लेखक/निर्देशकबाट हिरो, मोडल, गायक हुँदै आइटम डान्सर बनेका निश्चलसँग गरिएको कुराकानी :
‘लुट’ पछिको आफ्नो करिअर कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
बम्पर स्टार झर्दै–झर्दै गइरहेको जस्तो लाग्छ । ‘टलकजंग भर्सेज टुल्के’ मैले लेख्न नसक्ने जनराको थिएन, त्यसैले आर्टिस्टिक रूपमा हेर्न चाहेको फिल्मलाई कमर्सियल भ्यालुमा भन्न खोजें । केही हदसम्म सफल भइयो, केही आफैंलाई चित्त बुझेन । सिक्वेललाई न्याय गर्ने चक्करमा पात्रलाई मात्र न्याय गर्दा ‘लुट २’ झन् बिग्रियो । खासमा म दिलोज्यान दिएर लागेकै छु तर आउटपुट घटेको–घट्यै छ । सही र गलत छुट्याउन नसकेको महसुस हुन थालेको छ । ‘२ रुपैयाँ’ खेलेर चाहिं कुनै पछुतो लागेको छैन ।
यसको मतलब हामीले तपाईंको क्षमताभन्दा बढी अपेक्षा राखेछौं ?
‘लुट’ त्यतिबिघ्न सफल हुँदा आफैं छक्क परेको थिएँ किनभने दर्शकबाट तीन वर्षमै निर्देशक बनेको थिएँ । त्यसबीचमा जे सिकें, जस्तो कथा भन्न चाहेको थिएँ, त्यही भनें । ‘लुट’ यस्तो बेला आयो, जति बेला फिल्मलाई त्यसरी हेरिएकै थिएन । लुटपछि तपाईं–हामीले खोजेका जस्ता फिल्म धेरै आए । सबैले नयाँ तरिकाले काम गरिरहेका छन् । अर्गानिक केलाई भन्ने, प्रश्न उठेको छ । म आफैं अलमलमा परेको छु ।
त्यति बेला कोही प्रतिस्पर्धी थिएनन्, थोरै फरक काम गर्दा पनि ‘मार्क’ हुनुभयो । अहिले प्रतिस्पर्धा ज्यादा छ, त्यसैले दर्शकको मन जित्न गाह्रो परिररहेको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
त्यस्तो त होइन । ‘लुट’ मैले चाहेको फिल्म थियो, जसलाई आममान्छेले रुचाए । त्यसपछि चाहिं त्यो ‘रिदम’ मिलेन ।
तपाईं त ‘स्टार डाइरेक्टर’ पर्नुभयो । जे गरे पनि बिक्छ, चर्चा पाउँछ । सायद यही कारण लेखक/निर्देशकबाट हिरो, मोडल, आइटम डान्सरदेखि गायकसम्म बन्नुभयो । ‘क्रेज क्यास’ गर्ने हतारो हो ?
देख्दा त त्यस्तै देखिन्छ । तर यथार्थमा, म बारम्बार प्रयोग भइरहेको छु । कुनै चलिरहेको एक्टरभन्दा बढी त मेरो केमियो नै छ । कसैलाई सहयोग हुन्छ भनेर गरेको हो मैले । गीत गाउनेचाहिं मेरो भित्रैदेखिको चाहना थियो । त्यसबाहेक न आइटम डान्सर बन्ने चाह थियो, न
एक्टर नै ।
‘मल्टी–ट्यालेन्टेड’ देखिने लालसा हैन र यो ?
मैले आफूलाई बचाउ गरेर त साध्य छैन । सबथोक गरेको छ तर इच्छा थिएन भन्यो भने कसले पत्याउँछ ? बरु आजभोलि लाग्न थालेको छ, अब म परिवर्तन हुनु जरुरी छ । कसैले मलाई फिल्म गराउन खोज्छ भने गहन कारण खोज्नुपर्छ । कुनै उद्देश्यका लागि मात्र फिल्म गर्छु । जतिलाई सहयोग गर्नुपर्ने थियो, गरियो । अब गरिन्न ।
भनेपछि तपाईं आफैंलाई पनि मैले जे गर्दा पनि चर्चा हुन्छ, व्यापारमा फाइदा पुग्छ भन्नेचाहिं लाग्छ ?
नरेन्द्र महर्जन (वितरक) दाइले ‘२ रुपैयाँ’ रिलिज हुने बेला ‘तिमी भएपछि फिल्मले बम्पर ओपनिङ हुन्छ’ भन्नुभयो । मैले ‘यसको मतलब छैन’ भनिदिएँ । म यतातिर सोच्दै सोच्दिनँ ।
तर मेरो प्रश्नचाहिं त्यही लहडको पछाडि लाग्नुभयो भन्ने हो ?
अहँ होइन । लुटले गर्दा ‘गुडविल’ कमाएको छु, त्यसकै ब्याजले मात्र कहिलेसम्म टिक्छ भन्नेचाहिं लाग्न थालेको छ । जबकि मैले हरेक फिल्म आफूलाई प्रमाणित गर्ने बनाउनुपथ्र्यो ।
जे होस्, कामको गुणस्तरभन्दा पैसामुखी हुनुभएको चाहिं पक्कै हो ?
मैले जति फिल्म खेलेको छु, नाचेको छु, गाएको छु । तीमध्ये ‘काले दाइ...’ बाहेक अरूबाट एक रुपैयाँ लिएको छैन । कति पैसा कमाएको हुँला, आफैं बुझ्नुस् । अहिले आएर यो कुरा किन भनिरहेको छु भने अब मैले औसत गायक, हिरो वा डान्सरले भन्दा धेरै पारिश्रमिक माग्नुपर्छ । ताकि यस्तो अफर लिएरै नआऊन् ।
हाकु काले, गोफ्लेजस्ता गहकिला पात्र जन्माउने निर्देशकले ‘२ रुपैयाँ’ मा सतही पात्र चयन गर्नुभयो भनेर धेरैले चित्त दुखाएका छन् नि ?
निर्देशकको रूपमा कलाकार र पात्रलाई दिशा दिन सकिन्छ तर आफैं गर्न सकिन्न । म आफैं हाकु काले बन्न सक्थें होला त ? ट्राफिक प्रहरीलाई सवारी नियम थाहा हुन्छ तर उसले गाडी चलायो भने दुर्घटना हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी हुन्न ।
‘लुट’ मा अर्गानिक कन्टेन्ट मनोरञ्जनात्मक शैलीमा देखाउनुभएको थियो तर तपाईं जोडिएका पछिल्ला फिल्ममा मसला हाबी हुँदै गएको त सत्य हो नि ?
मैले भनिसकें, मेरो शक्ति बढ्नुपर्नेमा घटिरहेको छ । म आफैंलाई आफ्नो काम चित्त बुझेको छैन, अरूलाई के भन्नु र ?
यत्ति आत्मबोध भएको निर्देशकले हरेक फिल्ममा आइटम डान्स राख्नु उचित हुन्छ त ?
एउटा कुरा भनिदिनुस्, आइटम भन्दा उपयुक्त प्रचारको माध्यम के छ हाम्रो सन्दर्भमा ? मेरा लागि फिल्म सिर्जना मात्र होइन, फिल्मसँग जोडिएको व्यापारलाई बेवास्ता गर्नै सक्दिनँ । त्यसैले आइटम अनिवार्य लाग्छ । त्यसो त पछि आफ्नै पैसा हालेर वैचारिक रूपमा सोच्न बाध्य हुने फिल्म पनि बनाउँछु तर अरूको लगानीमा आफ्नो बौद्धिकताको परीक्षण गर्दिनँ । अहिले नै त्यस्तो गहन फिल्म प्रयास गरें भने अझ फन्टुस हुन्छु, गर्नै सक्दिनँ ।
त्यसो भए अहिलेको ध्येयचाहिं ‘एनिहाउ दुई घण्टा कटाऊ’ मार्काको फिल्म बनाउने ?
त्यसोभन्दा पनि यहींको कथा भनेर यहींका जनतालाई हलसम्म तान्ने प्रयास गर्छु । विदेशी फेस्टिभलमा जाने फिल्म बनाउँदिनँ । मेरा फिल्ममा प्रत्यक्ष सन्देश
केही हुन्न ।
‘लुट’ बाटै उदाएका दयाहाङ राई र सौगात मल्ल पनि ’ट्र्याक’ बाहिर छन् । यसको अपजस पनि कहीं न कहीं तपाईंको थाप्लोमा पर्छ । उहाँहरूको कामलाई कसरी लिनुभएको छ ?
चित्त बुझेको छैन । सौगात दाइ स्क्रिप्टमा आफ्नो पात्र मात्र हेर्नुहुन्छ, उहाँले कहिलेदेखि पूरै स्क्रिप्ट हेर्ने हो ? दयाहाङ दाइले ‘लुट’ मा जति गर्नुभएको थियो, त्यसपछि अलि–अलि मात्र फरक गर्नुभएको छ । नत्र उही हो । उहाँहरूभन्दा प्रतिभाशाली अभिनेता आए भने मात्र उहाँहरू सचेत हुनुहुनेछ । त्यसो त
हरेक मान्छेलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवन चलाउनुपर्ने हुन्छ । पेट खाली भएर कलाकारिता निस्कँदैन पनि ।
प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७४ ११:३४